Arsenaal tapha FA Cup isa marsaa itti aanutti dabre. Cheelsiifi Manchastar Siitiin dorgommiin ala ta’an - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Arsenaal tapha FA Cup isa marsaa itti aanutti dabre. Cheelsiifi Manchastar Siitiin...
Arsenaal tapha FA Cup isa marsaa itti aanutti dabre. Cheelsiifi Manchastar Siitiin dorgommiin ala ta’an
Taphoonni torbaan kana biyya Ingiliizitti geggeefaman taphhoota FA Cup dha. Taphoota FA Cup kana irratti hundi hinmoo’anne, hundis qabxii gahaa hinarganne. Kanniin injifatan, marsaa itti aanutti tankaarfatan keessaa Arsenaal isa tokko. Arsenaal tapha Braayton woliin geggeesse 3 – 2n moo’atee baheera. Moo’achuun kuni Arsenaal akka gara marsaa itti aanuutti ce’u isa dandeessise. Arsenal gara marsaa itti aanuutti darbuudhaan daran gara waancaa FA Cup kaasuutti kalaayeera. Arsenaal taphoota 3 wolitti aansee moo’achuu danda’eera. Injifannoon kunniin mooraa Arsenaal keessatti tasgabbiifi ufitti amanuun cimaafi daran ijaaramaa akka dhufuuf haala mijeesseera.
Tapha torbaan kanaa irratt qabxii gataan guddichi Manchastar Siitiidha. Siitiin tapaha FA Cup kana irratti garee Midilisbooroon 2 – 0n moo’atame. Injifatamuun Siitii hineeggamne ture. Garuu hadhooftus, Siitiin goolii 2 liqimsee wolmorkii FA Cup kana irratti. Golliin Booroo lamaan Manchastar Siitiin woldorgommii FA Cupn ala taasisteerti.
Bara kana kilboonni gurguddoon Premier League kanneen akka Cheelsii, Saawuzhamton, Siitii yeroodhaan FA Cup irraa geggeeffamaniiru. Manchastar Yunaayitid irra deebi’ee taphachuf dirqameera. Dabruufi kufuu Yunaayitid beekuuf hanga tapha itti aanuutti eeguun dirqama.
Previous articleMootichi Suud Arabiyaa Abdullaah du’aan boqate
Next articleEebjuun bebbeekamoon hiika maal qabu laata?